Taliska CXD oo ka hadlay khasaaraha Howlgal laga fuliyay Shabeellaha Dhexe | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Taliska CXD oo ka hadlay khasaaraha Howlgal laga fuliyay Shabeellaha Dhexe
Taliska CXD oo ka hadlay khasaaraha Howlgal laga fuliyay Shabeellaha Dhexe
Taliska Ciidanka Xoogga dalka ayaa faah faahin ka bixiyay howlgal qorsheysan oo ka dhan ahaa Al-shabaab oo laga fuliyay deegaano dhowr ah oo ka tirsan Gobolka Shabeellaha Dhexe ee Maamulka Hirshabeelle.
Taliyaha Ciidanka Xoogga dalka Jeneraal Odawaa Yuusuf Raage oo la hadlay Idaacadda Codka Ciidamada ayaa u sheegay in howlgal ka dhacay deegaanka Gal-labashiir lagu dilay 15 dagaalame oo ka tirsan Al-shabaab.
Taliye Odawaa ayaa sheegay in xubnaha la dilay ay ku jiraan Saraakiil, sidoo kalena howlgalka lagu dhaawacay in ka badan 20 xubnood oo kamid ah Shabaabka, waa sida hadalka u dhigay Taliyaha Ciidamada.
Sidoo kale Jeneraal Odawaa Yuusuf Raage ayaa tilmaamay in howlgalka ujeedkiisa uu ahaa mid lagu doonayay in Shabaab looga saaro deegaano ay kaga sugan yihiin Gobolka Shabeellaha Dhexe, isla markaana ay kala wareegeen deegaano dhowr ah.
Taliyaha Ciidanka Xoogga dalka Odawaa ayaa hadalkiisa kusoo gaba-gabeeyay in howlgalka qorsheysan ee Shabeellaha Dhexe uu sii socon doono, ayna dib ka soo sheegi doonaan khasaaraha ka dhasha.
Dhinaca kale Al-shabaab warar ay k qoreen barahooda dhinaca Internet-ka ayaa waxaa ay ku sheegteen inay iska difaaceen weerarkii kaga yimid dhanka Ciidanka dowladda, ayna ka dileen 4 Askari, sidoo kalena ay dhaawaceen 8 Askari kale oo ka tirsan Ciidanka dowladda Federaalka.
Maqaal horeFaah faahin: Qarax lagu dilay Ciidamo oo ka dhacay Jubbada Hoose
Maqaal XigaDowladda Somalia oo ka hadashay Imtixaanka shahaadiga ee Maanta bilowday